Manana fotoana fadimbolana ve ny saka? | Noti saka
Raha efa niara-niaina tamin'ny alika izay tsy tokony hofongorantsika isika, azo antoka fa rehefa mitondra saka mody dia hanontany tena isika raha toa ka manana vanim-potoana ny volontsika vaovao na tsia. Ary mazava ho azy, na dia amin'ny biby sasany aza dia zavatra mampiavaka ny vehivavy, amin'ny hafa ... tsia. Ao amin'ny vondrona iza no misy ny lavalava?
Eny ary, Raha te hahafantatra ianao raha manana fadimbolana ny saka dia hiresaka aminao momba izany izahay.
1 Manao ahoana ny hafanam-pon'ny saka?
1.1 Dingana hafanana
2 Manana vanim-potoana ve ny saka?
3 Torohevitra rehefa mafana ny saka anao
3.1 Mamorona rivo-piainana milamina
3.2 Sorohy ny adin-tsaina
3.3 Mitandrema tsara raha tsy mila vohoka tsy ilaina ianao
Manao ahoana ny hafanam-pon'ny saka?
Mba hamaliana ny fanontaniana raha misy fotoanan'ny fadimbolany na tsia dia tsy maintsy fantarintsika aloha hoe manao ahoana ny hafanan'ny saka, satria amin'izany fomba izany no hahafantarantsika bebe kokoa ny fomba fiasan'ny rafitra fiterahana ny "volon-koditra" volom-borona. Eny. Ny hafanan'ny saka dia voafehin'ny fizaran-taona, izay mifanindran-dàlana amin'ny lohataona sy amin'ny fararano, izay rehefa mahafinaritra ny toetr'andro ho an'ny alika kely mba hananana vintana lehibe kokoa ho velona.
Izy ireo dia afaka manana ny hafanana voalohany eo anelanelan'ny 6 sy 8 volana, saingy io dia miankina betsaka amin'ny toetrandro (raha mafana, azon'izy ireo atao izany na dia 5 volana aza), amin'ny fivoarany manokana ary raha betsaka ny saka ao an-trano.
Mizara efatra ny tsingerim-pananahana:
proestrus: maharitra eo anelanelan'ny 1 sy 3 andro. Rehefa hitantsika fa be fitiavana kokoa noho ny mahazatra izy, na dia mety ho tsikaritsika koa aza fa tsy dia mihinana firy izy ary / na maranitra sy fohy kokoa ny volany.
Oestrus: ny fahazotoana io. Maharitra 4 ka hatramin'ny 6 andro ny faharetany. Io rehefa mandray ny lahy ny saka. Raha sanatria tsy misy ny fiakarana dia haharitra eo anelanelan'ny folo sy efatra ambin'ny folo andro izy io.
Ny saka dia hibontsina fatratra hivoaka ny trano hitady saka.
Metaestro: maharitra 24 ora. Amin'ity dingana ity dia mandà mafy ny saka ny saka hafa izay te-hametaka azy ny saka.
Anestrus: dia ny fihenan'ny firaisana ara-nofo amin'ny saka. Maharitra mandra-pahatongan'ny fihodinan'ny fiterahana manaraka, izay mety roa tapa-bolana taty aoriana na 2-3 volana raha nisy ny fitondrana vohoka ary raha mety ny toetr'andro.
Manana vanim-potoana ve ny saka?
No. Mba hananan'izy ireo azy dia mila ovulate izy ireo, izany hoe ny atody dia tsy maintsy mamokatra atody tsy tapaka, izay tsy mitranga. Raha ny marina dia ataon'izy ireo ihany izany raha misy ny mitaingina. Noho io antony io dia tsy ho hitantsika - na tsy tokony ho hitantsika - izay ra misy ra.
Ny mety hitranga dia ny manisy marika amin'ny urine, zavatra azo sorohina / hifehezana raha raisintsika amin'ny castrate izany.
Torohevitra rehefa mafana ny saka anao
Araka ny hitantsika, ny saka dia tsy manana fe-potoana fa mandalo fotoanan'ny hafanana sy ny tsingerina dia mety hahagaga. Ny hafanana dia manana hafanana mandavantaona, ary matetika dia mifampitohy amin'ny lohataona sy fararano. Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, mandeha amin'ny dingana izy io ary ankehitriny rehefa fantatrao izy ireo dia ho mora kokoa ny hahafantatra hoe iza amin'ireo dingana raisiny ireo soritr'aretina omen'ny saka anao.
Ny fitondran-tenan'izy ireo no mampitandrina anao raha toa ka ao anatin'ny dingana iray na hafa izy ireo, ary izany dia manomboka amin'ny 6-8 volana (indraindray alohan'ny) ny ain'ny saka rehefa manomboka manana hafanana izy. Rehefa mandalo amin'ireo dingana ireo ny biby fiompinao mitaky anao hijery manokana.
Mba hanamorana ny fizotran'ny hafanana ho anao sy ny sakao ary tsy hampitsahatra ny faharetanao ireo dingana, dia hanome toro-hevitra vitsivitsy izahay handraisana izany tsaratsara kokoa. Mendrika ny fitiavanao sy ny sainao rehetra ny saka anao, ka mariho ny zavatra rehetra holazainay etsy ambany.
Mamorona rivo-piainana milamina
Midika izany fa ny tontolon'ny tranonao Tokony hanana toetrandro milamina izy io ary mahatsapa mahazo aina ny saka anatiny ho an'ny fianakaviana. Ankehitriny fantatrao fa tsy voaloto ny saka anao satria tsy manana ny fitsipika ao aminy izy, dia mila mitandrina ianao raha manamarika ny faritany miaraka amin'ny fahasimbana.
Amin'io lafiny io dia ity no tsy maintsy jerenao indrindra. Mba tsy hisian'ny olana dia aleo madio foana ny fakonao. Raha manohy mitsika ny saka any amin'ny faritra hafa ankoatry ny boaty fako dia misy tsifotra voaomana amin'izany.
Tsy maintsy hofafazana amin'ny tsifotra ianao amin'ireo faritra izay ialan'ny saka (ary tsy tokony hatao), ka rehefa manandrana indray ianao dia mahatsapa ho voahosotra noho ny fofon'ilay famafazana ary mahafoy ny fikasana hanisy marika ny faritany tsy tokony hataonao.
Manaraka ny teboka voalohany amin'ny torohevitra dia zava-dehibe ny hahafantaranao fa ny saka ao anaty hafanana izay tsy miteraka lahy dia mety hahatsapa fihenjanana. Ny vaovao tsara dia azonao atao ny misoroka izany ary manamaivana azy amin'ny toetr'andro fialantsasatra sy filaminana ao an-trano.
Azonao atao ny mametraka lamba firakotra mafana na singa fampiononana hafa izay miteraka filaminana sy fialan-tsasatra. Mazava ho azy, ankoatry ny fiheverana ireo rehetra ireo dia zava-dehibe ihany koa ny fahatsapan'ny saka anao ny fitiavanao fanampiny. Noho izany tandremo tsara kokoa izy, alao izy ary fantaro ny fitiavana rehetra ilainy mba handehanany any aoriana.
Mitandrema tsara raha tsy mila vohoka tsy ilaina ianao
Raha tsy tianao hitoe-jaza ny saka ary mbola tsy namindra azy ianao dia tokony hametra ny fahafahany mihetsika amin'ny dingana hafanana.
Miankina amin'ny habaka anananao ao an-tranonao sy raha avelanao hivezivezy ivelan'ny tranonao ny fahalalahana mihoatra ny kely, dia mety ho mora kokoa aminao na ho sarotra aminao kokoa izany. Raha ny anao, ny saka dia afaka mandeha sy mandeha rehefa maniry izy satria tsy voafetra ny tontolo iainana, tsy maintsy fehezinao ny fivoahan'izy ireo isaky ny mafana aho.
Raha tsy izany dia azo inoana fa hisy lehilahy eo amin'ny faritra ho tonga amin'ny toerana anaovan'ny saka anao "mametraka" azy. Raha mitranga izany dia ho bevohoka ianao ary afaka volana vitsivitsy dia hanana zanak'ondry ao an-tranonao ianao. Raha tsy tianao hitranga izany dia fero ny fitsidihany na manaova fotoana fohy any amin'ny dokotera mba hitsaboana azy. ary tsy mila manahy momba an'io lafiny manokana io ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Manana fotoana fadimbolana ve ny saka?
magaly ramirez dia hoy izy:
Azoko antoka fa mafana ny saka ko saingy tsy misy ratra na zavatra hafa ary mbola tsy nitaingina azy, na izany aza, rehefa nandry teo amin'ny tongotro izy dia navelany nilatsaka ra ny patalohako.
11 volana izy, ara-dalàna ve izany? ,: /
tsy misy lalàna?
Mamaly an'i magaly ramirez
Tsia, tsy manana ny lalàna ny saka.
Raha namela anao misy tasy ra ianao, dia tokony ho hitan'ny mpitsabo ny biby, satria tsy mahazatra izany.